Kutumira Tsamba, Kutenga Nokutengesa Munguva Dzinotaurwa muBhaibheri | Waizviziva Here?
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Cebuano ChiSutu (Lesotho) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Croatian Czech Danish Dutch Estonian Finnish French Georgian German Greek Hiligaynon Hungarian Iloko Indonesian Italian Japanese Kinyarwanda Kirghiz Korean Lithuanian Malagasy Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Sepedi Serbian Setswana Shona Slovak Slovenian Spanish Swedish Tagalog Tsonga Turkish Twi Ukrainian Vietnamese Xhosa Zulu
Tsamba dzaitumirwa sei munguva dzinotaurwa muBhaibheri?
Mutakuri wetsamba wokuPezhiya
Tsamba dzehurumende yePezhiya dzaitumirwa nesangano rehurumende raiona nezvokutumirwa kwetsamba. Bhuku reBhaibheri raEsteri rinorondedzera maitirwo azvaiitwa kuPezhiya richiti: “[Modhekai] akanyora nezita raMambo Ahashivheroshi, akaisa chisimbiso nerin’i yamambo ine chidhindo, akatumira magwaro akanyorwa noruoko rwenhume dzaiva pamabhiza, dzakanga dzakatasva mabhiza aishandiswa kuendesa tsamba mubasa ramambo, mabhiza makono akaberekwa nemabhiza anomhanya kwazvo.” (Esteri 8:10) Tsamba dzehurumende yeRoma nedzechiuto dzaitumirwawo saizvozvo.
Tsamba dzevamwe vanhu dzakadai sedzakanyorwa naPauro dzakanga dzisingabvumirwi kutumirwa nenzira iyi. Vapfumi vaigona kutuma varanda vavo netsamba. Asi vakawanda vaitumira tsamba neshamwari dzavo kana kuti vanhu vavasingazivi vaienda kwavaida kutumira tsamba. Veukama, shamwari, masoja uye vaifamba vachitengesa vaigonawo kutumwa netsamba. Asi chainyanya kukosha ndechokuti aidzitakura adzisvitse uye asachinja mashoko acho. Bhaibheri rinoratidza kuti Pauro aitumira dzimwe tsamba dzake nevaKristu vaainamata navo vaifamba nzendo dzavo.—VaEfeso 6:21, 22; VaKorose 4:7.
Kutenga nokutengesa kwaifambiswa sei muIsraeri yekare?
Mufananidzo wemusika wemichero
Kurima, kupfuya mhuka uye kutengeserana ndizvo zvaiva musimboti weupfumi hwevaIsraeri. Bhaibheri rinotaura nezvemisika yaiva pamagedhi eguta yaisanganisira “Gedhi reMakwai,” “Gedhi reHove” uye “Gedhi reZvaenga.” (Nehemiya 3:1, 3; Jeremiya 19:2) Zvinoita sokuti mazita acho aireva zvinhu zvaitengeswa pagedhi rimwe nerimwe. Magwaro anotaurawo nezve“mugwagwa wevabiki” womuJerusarema uye zvimwewo zvaitengeswa.—Jeremiya 37:21.
Ko mitengo yezvinhu yaiva yakamira sei? Rimwe bhuku rinotsanangura Bhaibheri rinoti: “Mitengo yaingochinja-chinja nokufamba kwaiita makore, uye zvakaoma kuziva kuti chimwe chinhu chaiita marii panguva nenzvimbo zvakasiyana.” Kunyange zvakadaro, mashoko ari muBhaibheri nomuzvinyorwa zvekare anoratidza kuti mitengo yaigara ichingokwira. Somuenzaniso, makare-kare varanda vaiwanzotengeswa. Josefa akatengeswa nemasirivha makumi maviri, ayo angadaro aiva mashekeri. Uyu ungangodaro uriwo waiva mutengo wemuranda muzana remakore rechi18 B.C.E. (Genesisi 37:28) Papera makore 300, mutengo wacho wakanga wava mashekeri 30. (Eksodho 21:32) Pakazosvika zana remakore rechisere B.C.E., wakanga wava mashekeri 50. (2 Madzimambo 15:20) Papera makore 200, panguva youmambo hwePezhiya, mitengo yakanga yakwira zvokusvika pamashekeri 90 kana kutopfuura. Saka zviri pachena kuti dambudziko rokukwira kwemitengo rakabvira kare.